Programme PROSPERERCDDT ARTISANAT- MATSIATRA AMBONY - Programme PROSPERER CDDT ARTISANAT- MATSIATRA AMBONY - Programme PROSPERER
Antony telo no ilana ny Centre de Démonstration et de diffusion Technologique (CDDT) Artisanat na ny Ivotoerana fampiroboroboana ny asatanana ao Matsiatra Ambony :
hampirantiana sy ivarotana ny asa tanana ao amin’ny faritra,
ahafahan’ny mpanao asatanana mpikambana manovo fampiofanana ho fanatsarana ny kalitaon’ny sanganasany
ary farany anamorana ny fahazoan’ny mpikambana ny akora sy ny fitaovam-pamokarana.
Ankoatra ireo dia sehatra iray ifanakalozan’ny karazan’olona maro ny Ivotoerana : ao ny tantsaha, ny olon-tsotra, ny mpandraharaha, ny mpiasa birao, ny mpianatra mpikaroka, ny vahiny mandalo, ny mpizaha tany… Rehefa asa tanana vita ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony dia hita ao avokoa toy ny rary, ny petakofehy, ny tenona landy sy ny tenona kofehy, ny tanimanga, ny sary tefibika, ny taozavatra vita amin’ny hazo. Ankoatry ny varotra dia fomba iray ahazoan’ireo mpanao asa tanana mahazo kaomandy ny Ivotoerana ary efa mahatratra an-taoniny maro ny azon’izy ireo tamin’izany raha ny tatitra avy amin-dRamatoa RASOANAMBININA Saholy mpitantana ny Ivotoerana Fampiroboroboana ny Asatanana ao Isaha. Ny Vovonan’ny mpanao asa tanana no mamatsy vokatra ity Ivotoerana ity. Afaka manatitra ireo vokatra rehetra ao ny orinasa madinika ary tsy misy vola aloha afatsy 10 isan-jaton’ny vidin’entana ho fampandehanana ny Ivotoerana. Izay vidin’entana andefasan’ny mpamokatra azy ihany no ivarotan’ny Ivotoerana mba hampiodinana haingana ny varotra.